Sisebenzisa i-AI Yobunikazi beBlueOcean ukuvula imininingwana emisha yokuqina kwempilo | Martech Zone
Kusetshenziswa i-AI Yobunikazi beBlueOther Ukuvula Imininingwane Yomkhiqizo Wokuqina Okuxhunyiwe
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2020 Liza Nebel
Njalo ngonyaka, ikakhulukazi njengoba sisondela emaholidini futhi sicabanga ngemikhankaso ekhumbuleka kakhulu yonyaka, kunezimpi ezingenakubalwa zokubona ukuthi imiphi imikhiqizo ehehe izethameli. Ngokucindezeleka nokungaqiniseki okulethwe wubhubhane kulo nyaka, kunempi entsha, futhi kulokhu kuyimpi yempilo yethu.
Njengoba sizijwayeze ukwenza yonke into sisuka ekhaya, sabona indlela ubhadane oluletha ngayo ikusasa lokuqina. Imishini yasendlini ehlakaniphile efana nePeloton, Mirror, neTonal, isisize saphinde sazizwa sijwayelekile njengoba sathola izindlela zokudala ukusebenza ngaphandle kokungena ejimini. Futhi ngenkathi eminye imikhiqizo efana nePeloton inyuka ngokuthandwa, eminye imikhiqizo, njengo-Echelon, ibinomkhiqizo ophelele owehlulekayo.
Umkhiqizo wakho uyi-share share yakho
Njengenkampani eyaziwa ngokwakha ukuhlolwa komkhiqizo okuqhutshwa yidatha, sisebenzise injini yethu yamasu okuphatha i-AI ukubuyekeza okujwayelekile nokukhuphuka nemikhiqizo yokuxhuma exhumekile I-Peloton, I-NordicTrack, Mirror, I-Tonal, UkulwaCamp, I-Echelon, Futhi Tempo ukubona ukuthi lezi zivelele kanjani phakathi kwazo, nokuthi iluphi uphawu olungagcina luphumelele.
Uma sibheka izinto ezinjengamamethrikhi ezinkundla zokuxhumana, izikhangiso, amabhulogi, okuqukethwe kwewebhusayithi / ithrafikhi, izinkundla ze-inthanethi nezibuyekezo, ukuhlolwa kwethu kukhiqize i- IBlueScore kwinkampani ngayinye, okulinganisa ukusebenza kwayo kukonke phakathi. Kususelwa ekutheni imikhiqizo yabo ijwayeleke kangakanani, ayifani, ayiguquki, ihambisana kanjani, futhi ihlonishwa kangakanani phakathi kwezithameli zabo.
I-Tonal ikhombisa ukuthi ukuqeqeshwa kwamandla kunamandla okudlula ama-Spins
Ukuhlolwa komkhiqizo wethu kutholakale lelo zinga leTempo ne-Echelon ezansi. Echelon's UNdunankulu Bike I-plummet yemidiya ibangele ukuthi babeke ezingeni eliphansi kunawo wonke abathengi. Ukulungisa umkhiqizo wabo, kuzofanele batshale imali emikhankasweni emikhulu yokubambisana - njengokuthola amanxusa omkhiqizo aphawuleka njengoChrissy Teign noma uJohn Legend, ukukhuphula izilinganiso zamakhasimende.
IPeloton ihola iphakethe ngenxa yomphakathi wayo / isabelo senhlalo sezwi. Ngenkathi yayinevidiyo engathandeki yokwenyuselwa ngoKhisimusi ngonyaka odlule, ibuyiselwe emuva. Manje bafunda igumbi futhi bathepha kulokho abathengi abakufunayo empeleni. Ukubambisana noBeyonce nokuletha izinhlelo zokufaneleka emakholishi nasemanyuvesi abaMnyama ngokomlando kuyisinyathelo esiqonde ngqo kumkhiqizo wabo.
Iphuzu Elilodwa Nje Ngaphansi KwePeloton, Izimbangi Zezindawo Eziphansi
Kepha ngibeka ukubheja kwami ​​ku-Tonal. Ngamaphuzu ahlonishwa kakhulu ngokwesibili nephuzu elilodwa nje ngaphansi kwePeloton, abancintisana nabadlali beTonal ngoba bayazi ukuthwebula isisekelo samakhasimende abo ngokuxoxa izindaba okungaguquguquki nokwangempela. Ukwaneliseka okuphelele kukaTonal nakho kuhambisana noPeloton, kepha abanaso isilinganiso nokuqwashisa. Uma i-Tonal iqhubeka nokutshala imali kwimidiya ekhokhelwayo ngenkathi yakha ubukhona bomphakathi obuningi, kungathatha isabelo esikhulu semakethe ePeloton.
Kuyathakazelisa ukuthi iFightCamp inamaphuzu entengo ahlukahlukene kakhulu, ihlinzeka abathengi abaningi. Kodwa-ke, izindleko akuyona into yokushayela abathengi abayisebenzisayo ukunquma ukumela kwabo umkhiqizo. Ngakho-ke akunandaba. Imininingwane yethu ikhombisile nokuthi ngenkathi iMirror ingathandwa nguLululemon, ukumaketha kwayo akulutho. Ukukhulisa umkhiqizo wayo, kuzodingeka ukuthi batshale imali emikhankasweni yokumaketha engaguquguquki - eyodwa enezinkanyezi zeTikTok ingenza iqhinga.
Usebenzisa Le mininingwane Ukwenza Umkhiqizo Wakho
Kwabakhangisi abacabangisisa ngezindlela zokuhlala phambili komncintiswano Ikakhulukazi ngezikhathi zesiyaluyalu, yiziphi izinyathelo ongazithatha namuhla? Nayi iseluleko sami:
Umphakathi uyinkosi: Lalela umthengi. Umkhiqizo oqinile wakhelwe kumagugu, ukuthunywa okuqinile, namandla asekela lezo zinsika.
Funda igumbi: Ngaphambi kokuqhubekela phambili nomkhankaso wokumaketha, zibuze, ngabe lokhu kuyahambisana nemizwa yanamuhla?
Ungalokothi uyeke ukufunda: Kubalulekile ukukala ngokuqhubekayo ukuthi umkhiqizo wakho ume kanjani phakathi kwabancintisana nabo. Kukuziphi izindawo ophumelela kuzo? Yiziphi izindawo ezinendawo yokwenza ngcono? Ukuhlola njalo umkhiqizo wakho kuzokusiza ukuthuthukisa amasu akho nempilo yomkhiqizo jikelele.
Ekugcineni, umkhiqizo onemiyalezo engaguquguquki nomphakathi oqinile online uzokwenza kahle njalo. Ngenkathi amakhulu emikhiqizo ethanda ukugxila kuzikhangiso ezibizayo nangaphezulu kwezikhangiso eziphezulu, izingxoxo eziphilayo ezenzeka ku-inthanethi eziphoqa imiphumela nomkhiqizo othandekayo. Cabanga ngokwengeziwe emazingeni aphansi, ngobukhulu obukhulu.
Tags: aiukuqonda kwezethameliokuluhlazabluescoreukuqonda komkhiqizoukuqonda kwebhizinisiizinhlelo zokusebenza zokuqinaimikhiqizo yokuqina exhunyiweI-EchelonUkulwaCampizinhlelo zokusebenza zokufanelekaMirrorI-NordicTrackI-PelotonisikhathiI-Tonal
U-Liza unguMongameli, i-COO, no-Co-Founder we-BlueOther, ipulatifomu yecebo lomkhiqizo we-AI esiza izinkampani ukuthi zenze umncintiswano. ULiza uchithe iminyaka engama-20 edlule eshayela amasu wokuthengisa nokuthengisa ama-AT & T, Visa, DRM, American Express, Barclays, Time Warner, IBM nabanye. KwaBlueOcean, uLiza uhola phambili ekwakheni izinhlelo zokufunda ngomshini ezixazulula izinkinga futhi zinikeze ukuqonda ngezinga elikhulu nangejubane. Ngomsebenzi wakhe, uLiza ubonwe kubanikazi bebhizinisi labesifazane abaphezulu abangu-100 be-SF Business Times.
Umhlahlandlela Ophelele Wokusebenzisa i-LinkedIn Sales Navigator
Kungani i-Resilient B2B Commerce Iyindlela Kuphela Eya Phambili Yabakhiqizi Nabathengisi Thumela i-COVID-19
Dec 24, 2020 ngo-4: 33 PM
Ucwaningo olwesabekayo, uLiza. Kupholile ngokujulile ukubona ukuthi i-algorithm yeBlueOther izilinganisela kanjani izinto eziguquguqukayo zibe amaphuzu ahlelwe kahle omkhiqizo ngamunye.
Futhi kupholile ukuqhathanisa izikolo zakho zokubala ngokuqhathanisa nocwaningo olwenziwe ngokuzithoba / oluqhutshwa yisici engilwenzile esikhaleni. Uma ufuna ukwazi, ngine-athikili edume kakhulu ngokuqhathanisa iTonal, Tempo, neMirror lapha: (https://zenmasterwellness.com/tonal-vs-tempo-vs-mirror/ ). Zizwe ukhululekile ukufaka olunye ucwaningo lwami lwezimakethe ekuhlaziyweni okuzayo, w / isikweletu esinikeziwe 🙂
Mar 5, 2021 ku-7: 05 PM
U-Liza, i-athikili enhle futhi ngicabanga ukuthi kuyiqiniso impela ukuthi iTonal icoboshisa ukuxoxa izindaba, empeleni ithole elinye lamagundane ami okuzivocavoca (angakholelwa kwimishini yokuqina yokuxhuma) yokutshala imali eyodwa.
UPeloton ungumholi, kepha uTempo udubula (kanjalo ne-MYX). Ngiyajabula ukuthi ukhulume ngeKampu Yempi - ubukelwe phansi kancane.
Okokugcina, bekungelula ukukhetha okukodwa kwalokhu njengowesifazane. Ekugcineni, ngakhetha iTempo, kepha ngicabanga ukuthi ngabe ngijabule ngeTonal noma nge Mirror. Kwabesifazane laphaya abadinga umbono wentombazane, nakhu ukuqhathanisa okusize abesifazane ukuthi banqume - https://www.fithealthymomma.com/tempo-vs-tonal-vs-mirror/. Kukutshalwa kwezimali okukhulu, kepha lokho ubuchwepheshe kuwe, kanti iTempo ingaba ne-AI enhle kakhulu manje. Ngeke umangale uma abanye bebamba.